Sakafo alika mahay mandanjalanja: iza no tsara kokoa? | Tontolo alika
Ny iray amin'ireo zavatra mety hiteraka fisalasalantsika bebe kokoa rehefa manapa-kevitra ny sakafon'ireo biby fiompintsika dia ny sakafo voalanjalanja tsara kokoa. Miaraka amin'ny marika sy karazany maro be misy, indraindray dia sarotra be ny misafidy sakafo mifanaraka amin'ny filan'ny alikantsika.
Noho izany, Amin'ity lahatsoratra ity momba ny sakafo voalanjalanja tsara indrindra ho an'ny alika dia hiezaka izahay hanamora ny zavatra ho anao. Nisafidy lisitra iray misy sakafo alika tsara indrindra izahay, ary nosarahanay ihany koa tamin'ny sokajy, mba hahafahanao misafidy izay mifanaraka aminao indrindra. Manoro hevitra an'ity lahatsoratra hafa ity koa izahay Sakafo alika 7 tsara indrindra.
Ownat heveriko ho an'ny alika ...
Sakafo mialoha momba ny biby ...
ADVANCE Sakafo biby ...
1 Fahano amin'ny ankapobeny
1.1 Ny sakafo voalanjalanja tsara indrindra amin'ny ankapobeny
2 Famahanana manokana
2.1 Fitsaboana ara-pahasalamana: ny tsipika veterinera Royal Canin iray manontolo
2.2 Ho an'ny alika kely: Acana Puppy & Junior
2.3 Ho an'ny be taona: Orijen Senior
2.4 Ho an'ny alika olon-dehibe: Royal Canin Mini olon-dehibe
2.5 Ho an'ny alika voadio: Purina ProPlan OptiWeight
3 Sakafo lena: Lily's Kitchen
4 Fomba hisafidianana ny sakafo voalanjalanja tsara indrindra
4.2 Hazaka na habe
4.3 Filàna manokana
4.4 Tian'ny alikao
4.5 Torohevitra momba ny biby
5 Sakafo lena sa sakafo?
5.1 Heveriko fa
5.2 Sakafo lena
6 Aiza no hividianana sakafo alika voalanjalanja
Fahano amin'ny ankapobeny
Rehefa misafidy sakafo na sakafo voalanjalanja ho an'ny alikantsika, ny zavatra voalohany tsy maintsy raisintsika dia raha mila azy io amin'ny karazana manokana, ohatra, amin'ny dingana iray amin'ny fitomboana, aretina ... Saingy, amin'ny ny tsena Misy ihany koa ny fahana avo lenta izay Izy ireo dia mety amin'ny alika rehetra, amin'ny karazany rehetra, habe ary taona, ary na dia hypoallergenic aza.
Ny sakafo voalanjalanja tsara indrindra amin'ny ankapobeny
Acana dia iray amin'ireo marika famahanana kalitao avo indrindra eny an-tsena, satria ny akora ao anatiny dia ahitana hena vaovao na hena manta. Amin'ity tranga ity dia vokatra azo avy amin'ny trondro izy io (herringana Pasifika, sardine, hake, trondro ...), na dia misy karazana Acana aza dia manana kalitao mahatalanjona koa, ka azonao atao ny misafidy ilay tianao indrindra. Alika. Ny sakafon'i Acana dia tsy misy mihoatra ny latsaky ny ampahany 70% amin'ny hena. Midika izany fa ny fatana dia tsy matavy noho ny varimbazaha, ny vary na ny sakafo "mpameno" hafa (ary mety hiteraka alerika amin'ny alika sasany), fa manome toky izy ireo fa ny alikanao dia mandray ny proteinina rehetra ilainy.
Io karazany io Mety ho an'ny alika rehetra izy io, na inona na inona ny dingana ampitomboany, na dia amin'ny fifehezana lanja aza na raha misy allergy entin'ny sakafo. Ny hany teboka manohitra ity famahanana kalitao avo ity dia ny vidiny, izay ambony lavitra noho ny salan'isa.
Araka ny noteneninay, Mety mila mila sakafo manokana ianao, mifantoka, ohatra, amin'ny taonan'ny alikanao, aretina sasany mety hitranga (toy ny allergy) na koa ny karazany. Ireo fahana ireo dia manana firafitra nifanaraka tamin'ny filan'ny alika manokana ary izany no antony ilana azy ireo miankina amin'ny karazana toe-javatra ahazoana mitoetra ho faly sy salama foana.
Fitsaboana ara-pahasalamana: ny tsipika veterinera Royal Canin iray manontolo
CANIN ROYAL Sakafo ho an'ny ...
Miresaka avy amin'ny zavatra niainanay izahay rehefa nanolotra ny tsipika momba ny veterinera Royal Canin iray manontolo. Sakafo avo lenta tokoa izy ireo, ary, araka ny anarany, dia tsipika fitsaboana izy ireo, mifantoka amin'ny famaritana ny veterinera anao. (Midika izany fa aza omena sakafo alika gastrointestinal ny alika, ohatra, raha tsy nanome torolàlana anao ny mpitsabo anao). Araka izany, manana karazany maro izy ireo hanomezana alika anao sakafo tonga lafatra mifanaraka amin'ny filàny: Satiety, hifehezana ny lanja; Gastrointestinal, ho an'ny olana amin'ny fandevonan-kanina; Urinary, ho an'ny olana amin'ny voa; Anallergenic, ho an'ny allergy; Diabeta, ho an'ny alika diabetika ...
CANIN ROYAL - Sakafo ...
Ankoatra izany, Ny teboka iray manohana dia ny marika iray ihany manana ny kinova manontolo amin'ny endrika sakafo fahana na mando amin'izay ianao afaka misafidy izay mety indrindra amin'ny alikanao. Ny sakafo mando, na dia tsy mahazo aina loatra aza ny manome, ohatra, dia manintona ny alika bebe kokoa noho ny volony sy ny tsirony.
Ho an'ny alika kely: Acana Puppy & Junior
Miverina any Acana izahay hiresaka momba ny sakafon'alika, sakafo voalanjalanja misy kalitao avo indrindra izay hahatonga ny fivoaran'ny alikao ho tsara be fotsiny izany. Efa niresaka tamin'ny fotoana hafa isika fa ny akora ampiasain'izy ireo ao amin'ny Acana dia hena be dia be (sy sombiny manontolo), amin'ity tranga ity dia akoho malalaka, ary koa atody hanome proteinina bebe kokoa. Kely ihany koa ny croquette, ka mora ho an'ny alika kely indrindra ny mitsako azy.
Farany, Ity karazana ity koa dia atolotra, ankoatry ny alika kely (heverina ho mihoatra ny 7 volana) ho an'ny alika zandriny, izany hoe, ny tanora (7 volana eo ho eo isan-taona).
Ho an'ny be taona: Orijen Senior
ORIJEN Senior - Sakafo ...
Marika ambony hafa toa an'i Acana (raha ny marina dia avy amin'ny mpanamboatra iray ihany izy ireo) tena tsara na amin'ny tsiro na amin'ny fangaro. Ity sakafo manokana ity dia manaraka sakafo maivana an'ny akoho, vorontsiloza, trondro, atody ary legioma, ka mahatonga azy io ho an'ny alika antitra nefa mbola tsara be. Ankoatr'izay, kely ny croquette, ka tsy mandany vola na inona na inona hitsakoana azy ireo.
Ny lafiny ratsy dia izany ny fanadihadian'ny Amazon sasany dia mitaraina fa nahatonga ny alikany hahatsapa ho ratsy izany, noho izany dia ampirisihina ianao, alohan'ny hanovana ny sakafo, manontany ny mpitsabo anao.
Ho an'ny alika olon-dehibe: Royal Canin Mini olon-dehibe
Ho fanampin'ny tsipika momba ny Beterinina, iray amin'ireo tombony lehibe sy toetra mampiavaka ny Royal Canin, iray amin'ireo marika atolotry ny mpitsabo biby (ny mpanorina dia tsy iray ho an'ny tsy misy), dia toa manana vokatra namboarina tamin'ny firazanana, habe, taona sy fepetra rehetra. Ao amin'ny vokatra arosonay eto, dia omena sakafo avo lenta ho an'ny alika kely lehibe ny olon-dehibe.
Royal Canin Mini olon-dehibe ...
Te hanana bebe kokoa ve ianao? Ny vokatra mitovy dia azo alaina amin'ny kinova mando raha te hampifangaro azy amin'ny sakafo ianao na omeo fitsaboana ny alikanao.
Ho an'ny alika voadio: Purina ProPlan OptiWeight
Tsy miafina izany Ny alika sterilized dia mazàna matavy kokoa noho ireo izay tsy, noho izany ilaina ihany koa ny misafidy feed mifanaraka amin'ny filan'izy ireo. Ity iray avy any Purina ity dia tena tsara, satria mampihena ny fahatsapana hanoanana izany rehefa manampy ny alika hampihena ny lanjany mifototra amin'ny fomba fahandro matsiro avy amin'ny akoho. Ho fanampin'izany, natao ho an'ny karazana sy ny habe rehetra izy.
Sakafo lena: Lily's Kitchen
Sakafo lena ho an'ny ...
Y nifarana tamin'ny marika iray hafa izahay izay mirehareha amin'ny fampiasana hena sy hazandrano betsaka amin'ny fanomanana ny sakafony mando, Lily's Kitchen. Na dia lafo be aza izany, araka ny fanehoan-kevitra dia toa tian'ny alika ny tsirony, na dia ny teboka ratsy dia ny mividy fonosana miaraka amin'ny tsiro rehetra fotsiny, ka raha tsy tian'ny biby ny iray amin'izy ireo dia hanana izy manelingelina.
Fomba hisafidianana ny sakafo voalanjalanja tsara indrindra
Araka ny hitanao, misy sakafo voalanjalanja be dia be miaraka amina kalitao tena avo lenta eny an-tsena, noho izany dia mety ho sarotra ny misafidy ilay mifanentana amin'ny alikao indrindra. Noho izany, tokony harahina ireto manaraka ireto:
Ny taona dia iray amin'ireo zavatra voalohany, raha tsy voalohany, dia tokony hoheverinao rehefa mifidy sakafo ho an'ny alikanao. Ny ilain'ny alika kely, ohatra, dia tsy mitovy amin'ny an'ny alika olon-dehibe, toy ireo efa vanim-potoana mendri-kaja. Sakafo maro no manomana sakafo manokana kendrena amin'ny taonan'ny alika.
Hazaka na habe
Hazakaza na habe koa dia famaritana sakafo sasany, izay mirona mampifanaraka ny atiny amin'ny filan'ny karazany manokana. Noho izany, ny habe dia mifamatotra akaiky amin'ny firazanana, satria izy io dia toetra iray izay zarain'ny tsirairay. Ho fanampin'izany, ny karazana sasany dia mora miteraka olana ara-pahasalamana sasany amin'ny ho avy, ka ny fanomezana feed azy ireo mifanaraka amin'izy ireo dia mety ho hevitra tsara.
Ity karazan-tsakafo voalanjalanja ity dia tapa-kevitra ny vet. Izy io dia kendrena amin'ireo alika tratry ny aretina manokana. Ohatra, raha tsy mahazaka alika ny alika, dia ampifanarahana amin'ny filan'ny alika voan'ny allergy ny sakafo hypoallergenic. Ny fahana mahazatra hafa dia ireo mikendry diabeta, mihoapampana ...
Ireo tia ny alikanao Tena ilaina koa izy ireo rehefa mifidy sakafoSatria raha tsy mihinana azy tsara ianao dia mety tsy ho ampy sakafo, izay mazava ho azy fa mety hanome anao olana. Izany no antony anolorana hevitra be anao hisafidy tsiro tianao: trondro, akoho ...
Torohevitra momba ny biby
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay, Ilaina tokoa ny torohevitra momba ny biby raha hisafidy feed tsara. Araraoty raha maka ny alikanao hanao fizahana (hanomezana vaksiny azy, ohatra) ianao hanontaniako ny mpitsabo biby raha ny fahitako azy no nanoro anao anao. Rehefa dinihina tokoa, ny matihanina no vonona tsara indrindra hanome sosokevitra ny amin'izay hamahana ny biby fiompintsika.
Sakafo lena sa sakafo?
Ny iray amin'ireo fisalasalana lehibe atrehintsika rehefa misafidy ny sakafo voalanjalanja tsara indrindra ho an'ny alikantsika dia ny hoe sakafo lena na sakafom-bary no tsara kokoa. Ny marina dia samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany ny tsirairay:
Heveriko fa matetika ilay karazan-tsakafo izay zatra fahombiazana lehibe indrindra. Tena ahazoana aina ny manome, satria tsy maintsy apetrakao ao anaty lovia fotsiny izany ary miandry ny alika hihinana azy araka ny itiavanao azy. Raha ny mahazatra dia tonga amin'ny endrika kibble maina izay mahafinaritra ny mihinana ary miaraka amin'ny otrikaina ilaina rehetra, ankoatr'izay, ny sakafo maina dia manampy amin'ny fanadiovana ny nifin'ilay alika sy ny fahasalamana mandevon-kanina, satria tsy maintsy mitsako azy ireo alohan'ny hitelina azy ireo.
Ny iray amin'ireo fihenan-tsakafo miharihary indrindra dia ny tsy fisian'ny rano betsaka toy ny sakafo lena, izay hananantsika fitandremana manokana mba handanian'ilay alika ny rano ilainy.
Sakafo lena Mety ho an'ireo alika ireo izay somary mikorontana rehefa hisakafo, satria mahafinaritra kokoa ny endriny ary matetika ny tsirony no tsara kokoa sy mahery noho ny an'ny sakafo. Etsy an-danin'izany, ny tombony lehibe hafa dia satria, mando, manana rano betsaka kokoa noho ny feed, izay hydration fanampiny.
Na izany aza, ny sakafo mando dia tsy mahazo aina loatra araka ny eritreretiko. Tsy maintsy mitandrina ny ampahany azon'ny alika ianao (amin'ny ankamaroan'ny vokatra faratampon'ny lanjany) ary alao antoka fa mihinana azy io amin'ny toerana iray izy mba tsy hanimba.
Aiza no hividianana sakafo alika voalanjalanja
Misy toerana maro dia afaka mahita sakafo alika voalanjalanja ianao amin'ny endrika fahana sy sakafo lena, na dia misy aza no atolotra kokoa noho ny hafa.
Amazon Tsy isalasalana fa iray amin'ireo safidy tena atolotra indrindra izy io, satria mamela ny kitapo (matetika dia lehibe sy lehibe) ho tonga eo am-baravaran'ny trano miaraka amin'ny fiononana feno. Ho fanampin'izay, manana marika sy karazany maro tsy manam-petra izy ireo.
En magazay an-tserasera ho an'ny biby Hahita marika sy karazany marobe koa ianao, ho fanampin'izay, afaka mandeha manokana ianao haka torohevitra.
Na dia, raha mila torohevitra ianao, ny tena mahasoa dia ireo mpitsabo biby, izay hanoro ny sakafo tsara indrindra ho an'ny alikanao. Ankoatr'izay, ny ankamaroany dia manana kitapo amidy na ny dikanteniny amin'ny sakafo lena, avy amin'ny marika tsara indrindra, ary koa ny kinova fitsaboana.
Farany, Tsy mamporisika anao hisafidy feed ianao azonao jerena ao amin'ny magazay lehibe sy fivarotana lehibe, indrindra raha marika fotsy izy ireo. Ireo feed ireo dia matetika tsy manana kalitao faran'izay kely takiana amin'ny alika alikao.
Ny fisafidianana ny sakafo voalanjalanja tsara indrindra ho an'ny biby fiompintsika dia odyssey ihany, saingy soa ihany fa afaka manontany mpitsabo veterinera foana isika, satria ho fantatr'izy ireo ny fomba hanoroany anay ny karazany tsara indrindra ilain'ny biby fiompinay. Lazao aminay, efa nanandrana ny iray amin'ireto feed ireto ve ianao? Inona ny hevitrao? Sakafo mando na sakafo ve ny alikanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Sakafo alika mahay mandanjalanja: iza no tsara kokoa?